China Direct Reading Brinell Hardness Tester HBS-3000 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | KAIRDA
Direct Reading Brinell Hardness Tester HBS-3000 bụ nkenke usoro nhazi na micro-igwe na-achịkwa usoro mechatronics ngwaahịa, HBS-3000 metụtara usoro ọrụ yana ule ụlọ ọrụ nyocha, kọleji na ụlọ ọrụ sayensị.
• Emechiri-akaghị ihe mmetụta loading na electronic akara usoro na nakweere.
• Photoelectric N'ihe mmetụta, na 10 etoju nke ule ike.
• Site na ntinye ntinye dị nro, enwere ike ịhọrọ ntụgharị n'etiti usoro ule na ịdị ike dị iche iche.
• Enwere ike igosi data nke ọrụ na nnwale nnwale na ihuenyo LCD.
• Enwere ike ịpụta data nke nsonaazụ ule site na ngwa nbipute.
• Were aka gi gbanye mmanye mmanye na ihe nyocha.
Ike zuru ezu 62.5kgf (612.9N) ， 100kgf (980.7N) ， 125kgf (1226N) ， 187.5kgf (1839N) ， 250kgf 250kgf (2452N) ， 500kgf (4903N) ， 750kgf (7355N) ， 1000kgf (890GN) 3000kgf (29420N)
Nnwale Ule siri ike 8 - 650 HBW
Sisie Ike HBW2.5 / 62.5, HBW2.5 / 187.5, HBW5 / 62.5, HBW5 / 125, HBW5 / 250, HBW5 / 750, HBW10 / 100, HBW10 / 25, HBW10 / 500, HBW10 / 1000, HBW10 / 1500, HBW10 / 3000
Oge 50 ~ 60S
Ngụcha akwụkwọ kachasị nke usoro Drum 0.625μm
Oke kachasị elu nke osisi 220 mm
Anya n'etiti Center nke Indenter na Kọlụm 145 mm
Ịnye ọkụ AC 220V / 50Hz
N'ozuzu Size nke Tester (L × W × H) 550 × 250 × 780mm
Total arọ nke Tester 123 n'arọ
Nnukwu, ọkara, tebụl ule ule V
Ike alloy indenter （φ2.5，5，10mm）
Na ngụkọta 3
Nlere ule ule HBW / 3000/10 (150 ～ 250) HBW / 1000/10 (75 ～ 125)HBW / 187.5 / 2.5 (150 ～ 250)
Akwụkwọ, kaadị ikike
Ikwesi Ọnwụnwa Ule
Nnwale ule siri ike bụ otu n'ime ụzọ nyocha dị mfe iji nwalee ihe onwunwe. mgbe ule siri ike bụ kama ịnwale ule ihe onwunwe, ọ dị mkpa ịgbanwe ntụgharị dị n'etiti ike na ike.
1. Leeb ekweghị ekwe Tester Ezubere dị ka ndị ọhụrụ ofkpụrụ nke Leeb ekweghị ekwe Test iji kasị elu microprocessor technology.
2. Brinell ekweghị ekwe (HB) a ụfọdụ size (dayameta na-abụkarị 10mm) nke obi tara mmiri bọl ígwè na-enwe obi n'ime ihe onwunwe elu na a ụfọdụ ibu (n'ozuzu 3000kg) ma na-maka oge. Mgbe ebuputasịrị, nha nke ibu na mpaghara indentation bụ brinell ekweghị ekwe uru (HB), na unit bụ kilogram ike / mm2 (N / mm2).
3. Rockwell ekweghị ekwe (HR) mgbe HB> 450 ma ọ bụ sample bụ kwa obere, na brinell ekweghị ekwe ule ike ga-eji ma Rockwell ekweghị ekwe mmachi. nke 1.59 na 3.18mm ka ịpị elu nke ihe a tụrụ atụ n'okpuru ibu ụfọdụ, a na-agbakọkwa ihe ike nke ihe ahụ site na omimi nke iwe ọkụ. E nwere usoro atọ dịka ịdị ike nke ihe nnwale ahụ.
4. HRA: Ọ bụ ekweghị ekwe nwetara site na iji 60kg ibu na malite ịgba cone presser. A na-eji ya maka ihe siri ike (dịka alloy siri ike).
5. HRB: A na-enweta ihe isi ike site na iji 100kg ibu na 1.58mm n'obosara ígwè siri ike. A na-eji ya maka ihe ndị nwere obere ike (dị ka annealed steel, cast iron, wdg).
6. HRC: Ọ bụ ekweghị ekwe nwetara site 150kg ibu na mkpọpu ala-cone presser. A na-eji ya maka ihe siri ike (dịka ígwè siri ike.
7. Vickers ekweghị ekwe (HV) na gbakọọ site na ịpị n'ime ihe elu na ibu nke na-erughị 120kg na a diamond square cone impinger na a n'elu n'akuku nke 136 Celsius. Mgbe ahụ, a na-ekezi uru ibu site na elu nke oghere olulu.
8. Webster ekweghị ekwe Tester (HW)
O kwesịrị ekwesị ka ị tụọ ike nke ngwaahịa alloy.
Nke gara aga: Electric Elu Rockwell ekweghị ekwe Tester HRM-45DT
Osote: Kọmputa Brinell ekweghị ekwe Tester N'ogbe HBE-3000A